Mashiinka Warshadaha Culus |
Kombiyuutarka hawada ee Waxyaabaha
Qalabka kombaresarada hawada ee IoT (soo saaraha) 1. Baahida warshadaha Muhiimadda ay leedahay isticmaalka kombaresaradayaasha hawada wax soo saarku waa mid iska cad. Si kor loogu qaado tartanka badeecadaha loona yareeyo dhibaatooyinka kombaresarada hawada ee ay sababaan arrimo aan la hubin inta lagu jiro isticmaalka, codsiga PLC ...
Falanqaynta isticmaalka tamarta korontada Nidaamka la socodka khadka tooska ah
Iyada oo ay si isdaba joog ah u kordheyso tirada guud ee dhismooyinka iyo hagaajinta heerarka nolosha, isticmaalka tamarta ee dhismooyinka ayaa aad iyo aad muhiim ugu noqday isticmaalka tamarta bulshada. Waxaa jira qalab koronto badan oo ku jira dhismayaasha, maareynta qalabka qalafsan, iyo mid culus ...
Mashiinka Dharka Internetka Waxyaabaha
Internetka ee Xalka Waxyaabaha Makiinadaha Dharka Muddada "Laba iyo tobnaad Qorshaha Shanta Sano" waa xilli xasaasi u ah horumarinta warshadaha dharka ee dalkayga min weyn ilaa xoog. In geeddi-socodka hirgelinta u hoggaansamida dalka ee istiraatiijiyadda ballaarinta dom ...
Hawlgalka aaladda warshadaha iyo xallinta nidaamka maaraynta dayactirka
Marka la eego mawjadaha sii kordhaya ee internetka warshadaha caalamiga ah, aalado casri ah ayaa si aad iyo aad ah loogu adeegsadaa farsameynta dabacsan iyo wax soo saarka kale. Xasiloonida iyo kalsoonida aaladaha iyo manipulators-ka xariiqda wax soo saarka ayaa ahmiyad weyn u leh dammaanadda ...
Xalka kormeerka caqliga fog ee qalabka HVAC
Xilliga jiilaalka qabow, jawi wanaagsan oo diirran ayaa u baahan heerkulka gudaha, huurka habboon, iyo hawo nadiif ah; dhismooyinka guud waxay u isticmaalaan unugyo qaboojiyeyaal waaweyn kuleylka, sida loo hubiyo in qalabka lagu ilaalin karo heer kulka joogtada ah, iyo sida loo fuliyo iibka kadib ...
Farsamada Warshadaha Culus ee Internetka Waxyaabaha
Farsamada Warshadaha Culus ee Internetka Waxyaabaha Xalka I. Guudmarka Internetka Waxyaabaha waa eray aad ugu kulul mashiinada iyo warshadaha culus sanadihii la soo dhaafay. Isticmaalka albaabbada kontoroolka fog ee PLC ee mashiinada iyo warshadaha warshadaha culus ayaa sifiican ugu horumarey Shiinaha, bu ...
Nidaamka nidaamka kormeerka fog ee kuleylka
Xilliga qaboobaha ee waqooyiga, shuruudaha tayada kululaynta magaalooyinka ayaa sii kordhaya. In tamar yaraanta maanta, waxaa lagama maarmaan ah in la hagaajiyo tayada kuleylka iyadoo la keydinaayo tamarta. Iyada oo si joogto ah loo ballaarinayo shabakadda kululaynta, sida cilmiyeysan ee wax ku oolka ah loo xakameeyo ...
Qalabka korontada IoT Solutions Mid, qaabdhismeedka nidaamka Nidaamka Internetka Waxyaabaha ChiLink IOT qalabka korontada wuxuu qaataa qaab dhismeedka qaabdhismeedka, kaas oo loo qaybiyay seddex lakab: lakabka helitaanka xogta (adabtarada APRUS), barxadda daruuriga (GARDS Cloud platform), iyo PLC fog xakamaynta ga ...
Uumiga Turbaanka Internetka Waxyaabaha
Internetka Waxyaabaha Xalka ah ee loo yaqaan "Steam Turbine" Mowjadaha Internetka ee Waxsoosaarka Waxyaabaha ayaa si tartiib tartiib ah ugu sii soconaya warshado kala duwan oo ku yaal aagga warshadaha. Qalabka la iibiyay wuxuu kuxiranyahay shabakada xog aruurintana waa laqabtay. Albaabka kontoroolka fog ee PLC ayaa loo xushay inuu dhexgalo ...
Xalka nidaamka haydarka dabka ee caqliga badan
Maaddaama kaabayaasha qabuuraha ee la dagaallanka dabka magaalooyinka, biyo-mareennada dabka ay door muhiim ah ka ciyaaraan dabka. Nalalka dabka ee caqliga badan wuxuu ogaan karaa heerka biyaha ka baxayaan ee biyaha dabka isaga oo aan beddelin qaab-dhismeedka biya-baxa dabka asalka ah. 4G router ayaa la xushay oo macluumaadka biyaha waa la gudbiyaa ...
Kormeerka kuleelka IoT
Kuleeliyaha IoT kormeerka xalka Xaaladda Shisheeyaha Maaddaama ay tahay qalab gaar ah oo loogu beddelo tamarta dhinaca warshadaha, kuleelleeyeyaasha warshaduhu waxay fadhiyaan boos aad muhiim ugu ah wax soo saarka iyo nolosha. Albaabka kontoroolka fog ee PLC wuxuu hadda leeyahay astaamaha awood yar, tiro badan, s ...
Daabacaadda khadka wax soo saarka otomatiga ee nidaamka dalabka kormeerka internetka
4G shuruudaha xal router Inta badan makiinadaha daabacaadda dhaqameed wali waxay isticmaalaan kormeerka gacanta iyo hagaajinta khadadka gacanta. Habkani kaliya malaha xawaare daabacan oo gaabis ah iyo tayo liidata, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay sicir cillad sare leh, luminta waraaqo badan, khad iyo qalab kale, iyo waqti diyaarin dheer. The ...